Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Labsa ADO : Oromo Democratic Front
Posted by ODF on Tuesday, February 23, 2016 · Leave a Comment
Guraandhala 17, 2016
Koreen Hojii Raw’achiiftuu Adda Demokraatawaa Oromo (ADO), baatii sadeen dabran kana keessa sochii fi halleen Oromiyaa keessatti deemaa jiru gadi-fageenyaan xinxaluun erga irratti mari’atee booda toftaa fi tattaafiin Wayyaaneen aangoo ishee bakka duriitti deebifachuuf carraaqaa jirttu kan fashalee fi bu’a-dhabeessa ta’uu isaa mirkaneessee jira.
Qabsoo ummanni Oromoo hidhannoo-malee fincilaa fi diddaan geggeessaa jiru ADOn ni deggera; mamii tokko malee bira dhaabbatas. Haa ta’u malee cunqursaa fi hacuuccaan gosa kamiiyyuu ummata Oromomoo harka kennisiisee diinaaf gadi-galoo akka hin taasifne hubatamuu qaba. Ummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa deebifachuuf, biyya guutuu keessatti mirga guutuu gonfachuuf qabsoo gurmuu tokkoon finiinsaa jiru humni kamu gufachiisu fi danqaruu gonkumaa akka hindandeenye hubatamuu qaba.
Sirni bulchiinsa Wayyaanee wagoota 25f bososeera; haala jalqaba maayyii ti; daandii gadoo irra jirti. Qawwee fi basaasaan akka duraaniitti biyya Oromoo bulchuuf yaaduun abjuu dha. Ammaan booda bakka duraatti hin deebitu. Itiyoophiyaan kiyyoo fi shororkaa hamaatti seenaa jirtti. Wayaaneen dhaabbilee polotiikaa isheen morman hunda toftaa adda addaatiin dhabamsiiftee, aangoo diinagdee fi siyaasaa goobsifattee, lafaa fi qabeenyaa dhuunfattee, seera bal’eessuun malaanmaltummaa dagaagsitee Itiyoophiyaa hallayyaatti dhiibaa jirtti. Badii kana irraa baraaruuf jabeessaanii hojjechuun dirqamaa warra dubbiin ilaalu hundaati.
Kanaafuu Koreen Hojii Raw’achiiftuu Adda Demokraatawaa Oromo (ADO) warri dubbiin kun ilaalu hundi qabxiilee sadeen itti aanan kana irraatti akka hiriiranii fi dirmatan waamicha dhiyeessa.
Tokkoffaa, dhaabileen maqaa Oromootiin deeman ta biyya keessaa fi biyya ambaa jiran hundi tokkummaan haa gurmoofnu. Lammaffaa, dhabbileen siyaasaa fi hawaasaa Itiyoophiyaa dhaabilee Oromootti makamuun tumsa cimaa uummannee biyya keenyaa hacuuccaa fi dhiittaa Wayyaannee irraa haa baraarru. Sadaffaa, hawaasin addunyaa bulchiinsi mootummaa Wayyaanee wagoota 25n darbaniif biyyaatti akka gaariitti bulchaa jira jedhee faarsuu fi if goyoomsuu dhiisee osoo biyyaattiin badii fi wal-mancaasuu hamaa keessa hin seeniin, warra dubbiin ilaalu hunda waltajjii tokkoo irratti waliitti fidee mari’achiisuun biyaattii badii irraa oolchuu irratti akka hojjettu waamicha guddaa dhiyeesina.
Walabummaan uummata Oromoo waan hin oolleedha; akkasumas birmadummaan sabootaa Itiyoophiyaa hacuucaa Wayyaanee jala jirannii waan dhihoo jiruudha. Kanaafuu gareen dubbiin ilaaltu hundi daandii qajeelaa irratti deebi’uun tarkaanfii haqaa akka fudhataniif itti gafatummaa seenaa irraa akka oolan qaabachiifna.
Dhugaa fi Bilisummaan Hundaaf!
KHR ADO 17/02/2016
Haala Yeroo Ammaa Itiyoophiyaa keessa Jiru Ilaalchisee Labsa ADO 2016